Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga ịme ka ị 20 njem na fun egwuregwu na-agba ọsọ na Android. Ụfọdụ na-akwụ ụgwọ na ụfọdụ ndị free.
Ị eleghị anya na-ele Ice Age na-aga aga otu puku ugboro. Ugbu a, anyị nwere nnukwu mberede n'ihi na ị. Ọ bụrụ na ị na-akwado nke Ice Age na-aga aga, adịghị uche ohere a na ibudata na egwuregwu ugbu a.
2. gịrịgịrị Man Origins 2 Saga
Fan nke egwu fim? Ị gaghị agbaghara a mgbe ahụ! Frog nke egwu egwuregwu na fim nụrụ nke a egwuregwu n'ihi na n'aka. Ọ na-afọ ụfọdụ mgbe ị nụrụ nke "Egwu egwuregwu" ma onye aha bụ otu nzọụkwụ n'ihu ma ọ bụ gịrịgịrị-nwoke. Ị gaghị agbaghara egwuregwu a.
3. Family Guy The Quest maka Stuff
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na egwuregwu na Google Play. Rere fọrọ nke nta 10 nde na-echekwa! Ị na nna nke ezinụlọ ma na ị nwere ndị ozi na-azọpụta gị obodo. Obodo ụtọ udo ruo mgbe a ibu ọkụkọ wakporo. Ugbu a, ị 'ịzọpụta gị obodo na ndị gị. Egwuregwu dị na ụgwọ mbipute naanị. Ma anyị ga-ekwu na ọ bụ ọnụ ahịa ya!
4. Iwe nnụnụ
Ọ dịghị! Anyị echefubeghị ọkacha mmasị gị egwuregwu. Anyị na-adịghị eche na anyị nwere ike ịgwa gị banyere nke a egwuregwu na ị na-ama na-amaghị! Ọ dị maka iOS na android. Anyị na-n'aka na ị nwere ya arụnyere na ngwaọrụ gị ugbua. Ọ bụrụ na ị na-eme adịghị, nweta ya ugbu a!
5. olileanya na-adịghị Fandango Remastered
Anyị nwere ike tụlee egwuregwu a dị ka ndị kasị ewu ewu egwuregwu na Adventure Atiya maka android ngwaọrụ. Great na mma gameplay, ọ n'aka nwere ike igbu oge gị ruo ogologo awa. Egwuregwu a bụ nnọọ pụrụ iche mgbe ọ na-abịa gameplay.
6. Adventure n'ili Of Eden
Egwuregwu a, anyị ga-asị na ọ bụ onye zuru oge na-egbu! Adventure n'ili Of Eden bụ site na ihe anyị na-aga na-akpọ "na-awakpo ndị n'ili dị ka Lara Croft". Ọ e wepụtara dị ka ihe Adventure egwuregwu. Ị ga-Lara Croft na ị na-aga izute nza nke dị iche iche ahụmahụ!
7. Stella si Journey
Ahịa: $ 2,99
Oge na-egbu, ugwo egwuregwu, anyị na-amasị ya! Otu nwa agbọghọ aha Stella. Ọ na-agụ akwụkwọ otu ụbọchị ma ọ mberede dara n'ụra ma mgbe o tetara ụra, ọ bụghị na ụlọ ya ọzọ. Ọ bụ na akụkọ ọ na-agụ ...
Ị ga na-achịkwa nke ọtụtụ ụgbọ oloko na-eche ha nche. Ha nwere ike ugboelu bụla nke abụọ. Ị na-achọghị na. Ọ dịghịkwa anyị! Egwuregwu a nwere oké graphic na ike ghọọ ọkacha mmasị gị egwuregwu na-egwu. Download ọ na-ịchịkwa ụgbọ oloko ugbu a!
Limbo bụ otu egwuregwu ndị ahụ anyị na-na a na-eche afọ! Ọ e wepụtara n'ihu, n'ihi na njikwa n'elu ikpo okwu. Ma, n'ihi na amaghị ihe mere na ọ were ogologo oge maka egwuregwu a na-wepụtara.
Nke a egwuregwu amalite n'ezie na mberede! Egwuregwu bụ banyere otu nwa okorobịa na mberede kpọtere na a oké ọhịa. Na ị nwetara akara nke nwa okoro a .... Ọ na-efu $4.99 ma njikere ịlụ messed na isi ?! Download egwuregwu a ugbu a.
10. dọọrọ n'agha
Great ndịna-emeputa, oké gameplay! Ị ga-eziga ọzọ na mbara ala n'ebe dị anya site n'ụwa. Ị ga-aga a Re, ma ọ bụghị ya na-ezighị ezi. Ọ bụghị mere site ụmụ mmadụ, kama site maka ndịọbịa! Ndị ọchịchị chọrọ ihe ọmụma banyere ndị ae kere eke. Ha na-achọ ha dị ka ha ohu iji ihe ọmụma ha ... Nke a bụ egwuregwu eri ahụ nke ukwuu. Anyị nzọ ị chọrọ ibudata ya na-egwu ozugbo o kwere omume.
Ị tọrọ atọ n'ime a ụlọ na nanị ụzọ si bụ ụzọ n'ihu gị ma ogbenye gị! Ọ na-ekpochi! Ị na-amaghị otú ị nwetara ebe a, kama ọ bụla n'ime ụlọ n'ihu gị, bụ nzọụkwụ ọzọ na eziokwu. $0.99 bụ ndị na-eri. Anyị na-echeghị na ọ bụ n'ezie ọnụ! Cryptic Labyrinth bụ ihe njem egwuregwu maka android na oké ndịna.
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na nke kacha mma njem egwuregwu mgbe mere gam akporo na IOS! Ị na otu àgwàetiti na ị ga-alụ ọgụ ọzọ e kere eke na-eme ka gị onwe gị na ụwa. Ị ga-eche ihu 75 nnukwu anụ na 5 ọjọ bosses! -Ebibi ha na ihe karịrị 250 ihe. The "Olee otú" bụ gị nhọrọ. Anyị na-eche na ọ na-ada ka ihe na-akpali egwuregwu.
13. The maze agba ọsọ
Dabere na a nkiri. Ọ bụ ihe ụfọdụ na-eto eto zitere na "Glade" ụwa. Ma ha adịghị echeta otú ha nwere. Ha na-ekpebi gbapụ a iju n'ala ma ụzọ adịghị mfe ...
Ọ dị maka android on Google Play. Olee banyere ị na-agbalị ịgbanahụ ma na-ndú dị ka "Thomas" ?!
14. Cat Akụkọ
Akụkọ ahụ bụ banyere a cat nke nwere akara nke a nnukwu ụgbọ mmiri ma mgbe a jọgburu onwe oké mmiri ozuzo, ụgbọ mmiri ahụ ego n'anya na-ebibi. The cat aga n'ime oké osimiri ma n'ikpeazụ ọkọbọ otu àgwàetiti na nke ahụ bụ mgbe gị njem amalite. Iji mee ka gị agwaetiti na igba ụfọdụ ndụ na ya. Ya mere, gaa mee ka gị na agwaetiti si download njikọ!
15. Minecraft n'akpa uwe Edition
M n'ezie obi abụọ ị mgbe nụrụ egwuregwu a na ndị kasị njọ-emeputa mgbe! Ma adịghị ekpe ikpe ya ngwa ngwa! Ọ bụ otu n'ime ndị kasị eri ahụ egwuregwu mgbe mere. Ị spawn n'etiti enweghị ebe ma na ị nwere oge ruo mgbe n'abalị iji nweta onwe gị a Nchekwa ụlọ na-adị ndụ n'abalị. Steve kwesịrị na-adị ndụ n'abalị na n'ehihie, na-aga na Ngwuputa, ugbo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ na-enwe mmasị!
16. anọgidewokwa na-anyụ Manor
Ụlọ adịla mgbe unu ga-esi nso! Akụkọ nke egwuregwu bụ yiri ka a njem nleta. Onye na-anọ na a na nkwari akụ. Anyị ọbịa na-anụ na ụfọdụ egwu asịrị banyere ụlọ a. Ọ na-egwu ma ọ ike ịchịkwa ọchịchọ ịmata ya ...! Gbanyụọ ọkụ, na-esi gị ekweisi na imechi ọnụ ụzọ. Ihe na-egwu ebe a! Egwuregwu dị maka ma IOS na android. Na ọ na-efu naanị $0.99 nke bụ a zuru okè price n'ihi na ụfọdụ screams!
Ị na a Lawyer na ị na-aga France. Ị na-agwakọta elu na ụfọdụ ihe ndị i kwesịrị idozi. I kwesịkwara gaa ndị ọzọ ebe na-anabata ụfọdụ ibu ọrụ ndị ọzọ dị ka mma. Egwuregwu a tọhapụrụ gam akporo na Windows. Anyị hụrụ ya n'anya! Onye na-adịghị chọrọ ịbụ a ọkàiwu? Ịzụta na ibudata ya ugbu a.
18. The Wolf n'etiti anyị
Kere eke bụ ndị nwere ike atụgharị onwe ha n'ime ịhụnanya ụmụ mmadụ na anwansi! Ma, nsogbu amalite mgbe onye ndú nke a obodo na-akwado ha .... Ugbu a ọ bụ ihe niile unu ka ịhụ ndị a na ọjọọ e kere eke na-egbu ha. Egwuregwu bụ FREE na anyị na-n'aka na ị dị njikere ikpochapụ obodo gị, na-adịghị gị?
Ebe e nwere bụ oké na-egbu egbu agha n'etiti 2 n'akụkụ, Siths na knights nke "Jedi". Ihe ọjọọ Siths nwere nnukwu alaeze ahụ na nwetara ọtụtụ ndị Galaxy. Gị na otu bụ nanị olileanya ịzọpụta galaxy na ala si Siths. Ihe ị na-eche ?! Ị na nanị olileanya! Gaa na ịzọpụta galaxy.
Akụkọ amalite na a ụlọ nyocha na Anyanwụ System. Ha na-agba ụfọdụ ule dị iche iche teknụzụ. Na nke a ụlọ nyocha, e nwere bụ na ọ dịghị mmadụ. Ị nwere ike na-ahụ naanị ngwá ọrụ na robots-arụ ọrụ. Na ị bụ otu nke robots ma ihe na-atụghị anya bụ ihe na-eme ... Nke a bụ egwuregwu n'ezie fun na otu onye nke oge kacha mma killers nke oge niile. Ukwuu tụrụ aro.
The World si Best Okenye android egwuregwu ị kwesịrị ịma
Top 15 fun android egwuregwu na-egwu na enyi
Android Games APK-Olee otú Download Free Android Games na Full Version
Top 10 Kaadị Games maka Android
Top 10 Football Games maka Android Ọrụ
> Resource> emulator> Best 20 Adventure Games maka Android